US: Dawladda Mareykanka oo ku guuldaraysatay Xakamaynta ISIS
Home Somali News US: Dawladda Maraykanka oo ku guuldaraysatay Xakamaynta ISIS
US: Dawladda Maraykanka oo ku guuldaraysatay Xakamaynta ISIS
Wargayska Washington Post oo wareystay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Maraykan-ka ayaa sheegay in midawga dawladdaha uu hor kacayo maraykan-ku ay ku guuldaraysteen xakamaynta Dawladda Islaamka ee ISIS, islamarkaana aad loo dhaleecaynayo qaabka uu ula dhaqmayo Madaxweyne Barak Obama.
Wargeysku sidoo kale waxa uu masuuliyadda dusha ka saaray Madaxii hore ee sirdoon-ka qaranka Maraykan-ka ee CIA, David Petraeus oo waraysi uu siiyay Tv-ga BBS ee Maraykan-ka laga leeyahay arabacadii, ataa waxa uu sheegay in xulufadda uu maraykan-ku hogaaminayaa ku guuldaraysatay ilaa hadda xakamaynta ISIS.
Petraeus waxa uu intaas ku daray in sababta ay xulafaddu ku guuldaraysatay ay tahay wakhtiga oo caawinaya hadda ISIS iyadoo si balaadhan ugu baahaday Ciraaq iyo suuriya.
Petraeus oo ah ninkii Hogaaminayay Duulaankii Ciraaq ee 2007, Suaal la waydiiyay ayaa u dhignayd sidan. Miyay tahay in Maraykan-ku ku tiirsanaaddo Maleeshiyadda Shiicadda ah ee ay Iran soo hubaynayso si ay guullo uga soo hooyaan dagaaladda ay kula Jiraan ISIS.?
waxa uu ku jawaabay Gen. Petraeus waa in go’aan kaas laqaataa hadii si kale looga adkaan waayo ISIS.
[quote] Washington Times: Madaxa Golaha wakiiladda Maraykan-ka ee Boehner ayaa shalay yidhi “Maraykan-ka iyo xulafadiisaba dhul badan oo ku kala yaal ciraaq iyo suuriya ayay ka qabsadeen ISIS” [/quote]
Waxa uu sheegay wargeyska Washington Times in ciidamadda ciraaq iyo maleeshiyaadka shiicadda ah ee Iran hubeynaysaa Hadda u diyaar garoobayaan la soo noqoshadda Magaladda Ramaadi ee bishii hore ay la wareegeen Ciidamadda ISIS.
Wareysku intaas waxa uu raaciyay warbixintiisa in Madaxa golaha wakiiladdu ugu baaqay Madaxwayne Barak Obama in Istraatiijiyad cusub la yimaado oo lagula dagaalammo Dawladda Islaamka ee ISIS.
Mr. Boehner waxa uu hore ugu dalbaday in waxa laga badalo istraatiijiyadda lagula dagaalamayo ISIS, lakinse eedaymo badan ayaa uga yimiday shirciyahanadda Maraykan-ka.
Somaliland: Wejiga Labaad ee Qaadhaan Ururintu: Ma Gaadhi Doonaa Dadkii loogu tallo Galay, Mise Wuxuu noqon mid Naanayso Reeba!.
Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Oo Hada Tacsi U Diray Shacabka Reer Somaliland Iyo Cida Ka Baxday